Posted on अप्रील 12, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
परविारमा पिताजीका रूपमा सम्बोधित कृष्णप्रसाद सिन्धुलीको दुम्जाबाट व्यापार गर्न मोरङको रंगेली र त्यसपछि विराटनगर पुगेका हुन् । तर, उनी त्यहाँ आप्रवासीका रूपमा रहेनन्, विराटनगर बजार बसाएर त्यसको उन्नति र प्रगतिको आधार तयार गरििदए । त्यसैले बाहिरबाट गएर पनि उनी त्यहाँको रैथाने बने । थारू र राजवंशीहरूको बाक्लो बसाइ रहेको मोरङमा उनले पहाडिया सभ्यता र संस्कार भित्र्याए । जसले पूर्वी तराईलाई नै नयाँ संस्कार, सभ्यता र दृष्टिकोण दिएको मानिन्छ । व्यापारबाट आफ्नो परविारलाई सम्पन्न बनाएपछि उनमा राजनीतिक चेतना आयो, छरछिमेक, टोल र बन्धुवान्धव पनि सम्पन्न हुनुपर्ने दृष्टिकोणसहित ।
त्यही राजनीतिक चेतनाको उपज हो, उनका पाँच भाइ छोरामा उम्रेको राजनीतिक चेत । त्यसका कारण थिए, उनीहरूले पनि भारत प्रवासमा बस्नु र राणाहरूको कालकोठरीमै कृष्णप्रसादले मृत्युवरण गर्नु । त्यसैले मातृका, बीपीदेखि गिरजिाप्रसादसम्मले त्यही पथलाई पछ्याए । कृष्णप्रसादका पाँच भाइ छोराले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाए पनि पुख्र्यौली थलोमा आफूहरूलाई रैथाने सावित गर्दै रहे। तर, उनीहरूका छोरा, नातिको अवस्था त्यस्तो रहेन। बाहिरै बसेर पढ्ने वा पेसा-व्यवसाय अँगाल्दा नयाँ पुस्ताका अधिकांश सदस्य विराटनगरकै लागि अपरििचत छन् । जस्तो- बीपी-पुत्र प्रकाश, सशांक, केशव-पुत्र निरञ्जनलगायतको बढी समय विराटनगरबाहिर नै बित्यो।
केशव-पुत्र शेखरचाहिँ अपवाद हुन्, उनी त्यहीँको रैथाने बन्न सके। डाक्टर भएर पनि विराटनगरलाई नै कर्मथलो बनाए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका रूपमा उनले पूर्व क्षेत्रलाई नै कार्यक्षेत्र बनाए । र, अहिले पनि काठमाडौँभन्दा विराटनगरप्रति उनको मोह ज्यादा देखिन्छ। तारण्िाी-पुत्र ज्योति पनि विराटनगरको सामाजिक सम्पर्कमा रहेको मानिन्छ तर उनको दायरा साँघुरो छ। गिरजिाप्रसादकी पुत्री सुजाताले पनि चुनावका लागि मात्र विराटनगरलाई उपयोग गरनि्।
« कती छन त रगतचुस्ने “उडुसहरु” कोइराला परिवारको नालिबेली »